Masar oo laga helay “magaalo dahab ah” oo qadiimi ah | Biyoguurenews.com
Home Muuqaallo Masar oo laga helay “magaalo dahab ah” oo qadiimi ah
Magaaladan qadiimiga ah ayaa laga helay meel u dhaw goobaha ugu muhiimsan dalkaas.
Soo helitaanka magaalo 3,000 sano jir ah oo ku dhex luntay ciida Masar ayaa lagu amaanay inay tahay mid ka mid ah waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee taarkheed ee la helay tan iyo markii qabriga Tutankhamun.
Khabiirka reer Masar ee caanka ah Zahi Hawass ayaa ku dhawaaqay daahfurka “magaaladana dahabiga ee luntay” ee u dhow Luxor Khamiistii.
Wuxuu sheegay in raadintaasi ay ahayd magaaladii ugu weyneyd ee qadiimiga ahayd, ee loo yaqaanay Aten, weligeednaaan laga soo helin dalka Masar.
Betsy Brian, oo ah borofisar ku takhasustay cilmiga Egptology ee jaamacadda Johns Hopkins University ee Baltimore, Mareykanka ayaa ayaa sheegtay”daahfurka magaaladan luntay waa daahfurka labaad ee ugu muhiimsan ee laga helay qabriga Tutankhamun.”
Waxay intaasi raacisay “Magaaladuwaxay na siineysaa aragti yar oo ku saabsan noloshii Masriyiintii hore” waqtigaas oo boqortooyadu ay ahayd mida ugu taajirsan.
Hadda, toddobo bilood ka dib markii ay qodistu bilaabantay, dhowr aag ama xaafado ayaa la helay, oo ay ku jiraan, deegaammo kale.
“Hawlgallo badan oo ajnabi ah ayaa ragaadiyay magaaladan waligoodna ma helin,” ayuu yiri Dr Hawass, wasiir hore oo ka mid ah waxyaabaha qadiimiga ah.
Waxa uu sheegay in ay sii socoto howsha qadiimiga ah kooxdiisuna ay “rajeyneyso in ay soo bandhigaan qabuuro lama taabtaan ah2.
Masar waxay dooneysaa inay horumariso hiddaheeda qadiimiga ah si ay dib ugu soo nooleyso waaxdeeda dalxiiska, ka dib sanado badan oo qalalaase siyaasadeed iyo carqalado uu sababay cudurka faafa ee coronavirus.
Toddobaadkii la soo dhaafay, Masar waxay soo qaaday haraadiga saldanadihii hore ee dalkooda iyagoo soo marsiiyay Qaahira iyagoo soo maray hab socod taariikhi ah.
Daawashadii quruxda badneyd ayaa lagu arkay 18 boqor iyo afar boqoradood – oo laga soo daabulay Matxafka cusub ee Masaarida kaas oo masaafo 5 km u jira ki hore.
Amenhotep III iyo xaaskiisa Queen Tiye ayaa ka mid ahaa meydadka loo wareejiyay goobta nasashada cusub.
Previous articleSiyaasi Jaamac Shabeel oo shaaciyey Mawqifkiisa Furashada Ururada Siyaasadeed+kuu ka mid noqon doono
Next articleEx Madaxwayne Sheekh Shariif oo Halis ku Tilmaamay Hadii Farmaajo Korodhsado 2sano